Home Wararka Cumar Filish: “84 qof aya mushaar ku qadato in ay ila taliyaan,...
Cumar Filish: “84 qof aya mushaar ku qadato in ay ila taliyaan, mid ka midana wali ma arag”
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish oo markii uu la wareegay mas’uuliyada gobolka waxa loo sheegay in ay jiraan boqolaal qof oo Gobolka mushaar ka qaato kuwaas oo aan u soo xaadirin shaqo. Qaar badan oo ka mida shaqaalahaas waxa laga soo diray xafiisyada Madaxweynaha, gaar ahaan xaaska madaxweyne Farmaajo Ra’iisal Wasaaraha iyo qaar ku dhaw dhaw Fahad Yasin.
Mushaarka ugu badan ayaa waxa la siiyaa kooxo lagu sheegay in ay la shaqeeyaan Madaxweynaha oo lagu magacaabo Xoogaga Wadaniyiinta. Cuamr Filish oo isku dayay in uu dabagalo arimahaas ayaa looga digay in uu wax ka badalo liiska mushaarka ka qaata Gobolka Banaadir.
Gudoomiye Cumar Filish ayaa dhanka kale codsaday in uu kala diro lataliyayaasha ku qoran xafiiskiisa ee mushaarka ku qaata in ay isaga lataliyaan, laakiin waxaa lagu amray in uu sugo ilaa amar danbe, Cumar Filish ayaa sheegay in xafiiska ay mushaar ka qaataan 84 qof oo lagu sheegay in ay isaga lataliye u yihiin.
“…waxa ay waaxda maaliyada iyo musharaadka ii keeneen 84 qof oo ku qoran in ay aniga ila taliyaan, kuwaas oo mushaar “A” ka qaato gobolka, …walaahi in aan qof ka aqoon 84 taas qof iskaba daa in aan arkay” ayuu yiri Gudoomiye Cumar Filish oo la hadlaayay dhaqanka beesha Abgaal.
Waxaa muuqato in Cumar Filish go’aansaday in uu la shaqeeysto kooxda Xukunla Hasyata oo si aan qarsoodi ahaynin u dhacaya casnshuurta laga soo uruuriyay shacabka masaakiinta ee ku dhaqan Muqdishu. Dad badan ayaa rajo ka qabay in Cumar noqonyo mid u naxariisto shacabka Muqdisho oo hantidooda xafido.
Mid ka mida mas’uuliyiinta ku dhaw dhaw Cumar Filish ayaa u sheegay MOL in Cumar oo baahi badan hayso loo magacaabay Gudoomiyaha Gobolka, waxa uuna g’aansaday in waxa uu ka qaadan karo ka qaato Gobolka inta aan la badalin isaga. Waxa uu yiri “walaal Cumar Filish 40 caruura ayaa ku xariirta, qoys balaarana waa ka dhashay, Cumar oo ah nin fiican , hada ma joogo meel uu dagaal la galo kooxda meesha keensatay..”.